Light Gray Darkening Blackout ákwà mgbochi, China Light Gray darkening Blackout ákwà mgbochi Manufacturers, Suppliers, Factory - Zhejiang Rancho Santa Fe home akwa Co., Ltd
Ìhè Gray Darkening Blackout ákwà mgbochi
Model Number: Right Now
GREAT EFFECT & PREMIUN QUANLITY - Ezigbo windo windo maka ịchọ mma ụlọ, ọkachasị maka ekeresimesi, ụbọchị inye ekele. Otutu agba ịhọrọ, dabara maka ụdị dị iche. Uwe ahụ n'onwe ya bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu n'ụwa niile. Site na mma mara mma, ọ na-enye ikuku dị mma ma dịkwa mma maka ime ụlọ. Ihe bụ 100% polyester, ọ nwere ike igbochi 85% -93% ọkụ na UV ray.
MGBE Ọ BOCR & IHE & ỌMA AKW INKWỌ AKW –KWỌ - ha bụ ákwà mgbochi ma ọ bụ ákwà ngebichi. Ibu akwa bụ site na 200gsm ka 320gsm. Ha dị nnọọ nro ma nwee obi ụtọ iji metụ aka. Mgbakwunye zuru oke maka ime ụlọ ihi ụra, ime ụlọ, ime ụlọ ụmụaka na wdg. Ngwongwo ahọpụtara ahọrọ ahọpụtara, enweghị mkpirisi mkpirisi, yana njikwa njikwa dị mma maka ahụmịhe ngwaahịa ka mma. Won't gaghị eburu ụda onye agbata obi gị na fụrụ mkpọrọhịhị. Ọ dị ezigbo mma maka ụra, ọkachasị maka ụmụ aka.
Mma Dchọ Mma
AHERHER ỌGW THGWER
100% polyester. Otu ihe na agba azụ dị ka ihu. Igwe akụrụngwa n'okpuru ogo 30. Na-eche free ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ọzọ.
Emere site na 100% adịchaghị mma Super Soft fabric (Polyester, Imported). Pencil pleat blackout ákwà mgbochi na-adịgide adịgide ma na-atọ ụtọ ịmetụ aka. Gbochie 85-95% ìhè anyanwụ na ụzarị UV (Agba gbara ọchịchịrị na-arụ ọrụ nke ọma) na-enweghị njikọta ekele maka teknụzụ atọ ịkpa ákwà. Ìhè & ụda na-ebelata maka nzuzo na ụra na-enweghị nsogbu. Ya mere, ọ nwere ike ijide n'aka na ụwa ndị ọzọ agaghị enye ndị mmadụ nsogbu.
Collelọ oriri na nkwari akụ Duvet Cover Set Stitch Luxury Bedets Sets
eguzosie ike nkecha romance nke girl blush pink HF29037 bedspread
Soft ikpa agbakọta Blue na Light Gray Plain Solid Blackout Our Curtain8267
Amazon Rain Forest polyester ebipụta sheer